QM oo dowladda Soomaaliya ku boorrisay xoojinta la dagaallanka musuqmaasuqa | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA QM oo dowladda Soomaaliya ku boorrisay xoojinta la dagaallanka musuqmaasuqa
QM oo dowladda Soomaaliya ku boorrisay xoojinta la dagaallanka musuqmaasuqa
Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan ayaa dowladda Soomaaliya ku boorriyay in ay xoojiso ololaha ay ugu jirto la dagaallanka iyo dabar goynta musuqmaasuqa ee hay’adaha dowladda.
Mudane Swan ayaa soo dhoweeyay horumarka ay Soomaaliya ka samaynayso dhanka xoojinta sharciga iyo dhisida hay’adaha isla xisaabtanka iyo daah furnaanta waxa uuna hoosta ka xarriiqay muhimadda ay leedahay in sii dardar geliyo howlahaas ilaa ay si buuxda u mira dhalaan.
“Musuqmaasuqa ayaa carqalad weyn ku ah horumarka. Wuxuu wiiqayaa dadaallada ku wajahan dhismaha-qaranka, nabadda iyo dib-u-heshiisiinta. wuxuu baabi’inayaa kalsoonida shacabka, wuxuu daciifinayaa awoodda hay’adaha dowliga ah ” ayuu Swan ku yiri bayaan uu soo saaray oo lagu xusayo Maalinta Caalamiga ah ee la-dagaallanka musuqmaasuqa.
Wuxuu sheegay in Qaramada Midoobay ay aad u dhiirrigelineyso sharciga uu dhowaan saxiixay Madaxweyne Farmaajo ee ku saabsan la dagaallanka musuqa iyo ansixinta dhismaha guddiga tallaabadaas oo uu ku tilmaamay mid ammaan iyo bogaadinba mudan
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda wadda dadaallo ay ku muujinayso hufnaan iyo daah furnaan gaar ahaan dhanka hay’adaha maaliyadda taas oo kalsooni ku abuureysa dowladaha iyo hay’adaha saaxiibka la ah dowladda ee tageera.
Soomaaliya ayaa la tilmaamayay sanadihii u dambeeyay in ay ku tallaabsanaysay kobac dhanka dhaqaalaha ah iyada oo sidoo kalena wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigtay miisaaniyadda dowladda iyo dakhliga oo labaduba sare u kacay.
Previous articleWefdi kasocda beesha caalamka oo lakulmay Madaxweynaha KG.
Next articleAbiy Ahmed oo la guddoonsiiyay Abaalmarin